Shirkad Australian ah oo daboolka ka qaaday inay Somaliland ka bilaabayso Qodista iyo sahaminta salliidda | Berberanews.com
Home WARARKA Shirkad Australian ah oo daboolka ka qaaday inay Somaliland ka bilaabayso Qodista...
Shirkad Australian ah oo daboolka ka qaaday inay Somaliland ka bilaabayso Qodista iyo sahaminta salliidda
Australi-(Berberanews)-Shirkadda Jacka Resources oo fadhigeedu yahay dalka Australia, ayaa ku dhawaaqday sahamin iyo qodis ay ku sammaynayso goobo ka mid ah Somaliland oo la sheegay inay ku duugantahay saliid.
Sida lagu faafiyay warbixin uu daabacay Shebekadda Christian Science Monitor- Jacka Resources oo hore u daahfurtay salliidda deegaanka Lake Albert ee dalka Uganda, waxay dhawaan Somaliland ka bilaabi doontaa sahaminta, qiimaynta iyo qodista dhul cabbirkiisu yahay 22,000 oo Km square oo ku yaala Koonfur-galbeed deegaanka Somaliland, gaar ahaan balloogga Garxajis, halkaasoo warbixintu sheegtay in salliidda laga helay sagaal goobood oo oogadda dhulka ah.
“Waa wadan aan dal kale aqoonsan, sidaas daraadeed ganacsiga oo dhami wuxuu ku sallaysanyahay laba midkood-Akowno madaxbannaan amma kaash, dhinaca dhulka kooxo maleeshiya ah baa dagaal kula jira dawladda oo si joogto ah u afduuba shaqaalaha Hay’adaha gargaarka ee ajaanibka ah. Dhinaca badda budhcad-badeedku waxay weeraro ku qaadaan oo qabsadaan maraakiibta ganacsi, kuwa taangarada ah iyo xataa doonyaha raaxada. Cuntada ugu badan ee dhaqaalaha dalku waxay ka timaadaa mucaawimooyin debadeed, sababtoo ah gobolka waxa aafeeyay iska hor imaad iyo macaluul.”ayay tidhi warbixintu, waxaanay inta aku dartay “Miyaad maalgelin lahayd dal noocaas ah? Shirkadda Australian-ka ah ee Jacka Resources ayaa sammaysa, haddii aad dalkaas Somalia u malaysay, aad baad ugu dhawdahay. Waddanku waa Somaliland oo madaxbannaanideeda ka qaadatay Somalia 1991, waxaanay noqotay mid ku naaloonaysa jamhuuriyad madaxbannaan oo shaqaysa, laakiin aan la aqoonsan. Waa goob nabadgelyo iyo xasilooni ka jirto markaad eegto jaarkeeda bariga iyo Koonfurta, sidoo kale Somaliland waxay ku taal dhul qaab-dhismeed ahaan laga heli jaro saliid.”
Guddoomiyaha Shirkadda Jacka Scott Spencer, ayaa sheegay sida wrabixintu xustay in shirkaddiisu rajaynayso wada-shaqayn dhexmarta shirkadda Petrosoma, oo ah shirkad reer Somaliland ah oo wakiil ka ah Prime Resources Limited, si ay sahamin uga sammeeyaan aagga Habra Garhajis, halkaasoo uu sheegay inay tahay goob qanniimmadi ku duugantahay.
Warbixintu waxay xustay in noockasta oo maalgelineed ay ka faa’iidaysan doonaan shacabka Somaliland oo ka heli doono fursado shaqo oo ay ka mid yihiin xammuulka, guryaha, hudheellada iyo addeegyada kale ee wershadayntu u baahantahay.
Maxamed Yuusuf Cali oo ah maalqabeen u dhashay Somaliland oo wakiil ka ah shirkaddaha Prime Resources and Petrosoma oo warbixintu xustay ayaa isaguna sheegay inay maalin weyn u tahay dadka rere Somaliland oo dhammaantood ka faa’iidi doona salliidda laga saarayo Deegaankaas.
Previous articleBadhasaabka Gobolka Saaxil oo ka qaybgalay Barnaamij shirkadaha Dahabshiil Group ku maalgelinayaan Maxtabadda Jaamacadda Berbera.Video
Next articleSomaliland Government and Traditional Elders Agree on A Five Point Strategy
Somaliland oo xabsiga ka sii daysay musharraxiin
Somalia: 13 qof oo ku dhintay roobabka Muqdisho
Somaliland: Wasaaradda Deegaanka oo xidhaysa seerayaasha
Dhallinyaro ma dhabbaa mise gudcur baan guurayaa? WQ: Xuseen Cali Nuur
Xogta nooca hubka Iran siisay Xamaas
Madaxweynaha Somaliland oo kulan la yeeshay Maareeyaha DP World
Meelaha la saadaaliyay inu ku soo dhici karo gantaalka shiinuhu
Somaliland Waxay u Qalantaa Aqoonsi Caalami ah : The Economist
Itoobiya oo sheegtay in ay fashilisay qorshe dil oo loo geysan...